လယ်ယာမြေ၊ ဥယျဉ်မြေ၊ ရွာမြေ ကွက်ရိုက် မြေကွက်တွေ ဝယ်မယ်ဆိုရင်
Apartments For Sale in Yangon
Leasing Apartments in Yangon
Rent House in Yangon
Office For Rent in Yangon
ဈေးကွက်ထဲမှာ ဥယျာဉ်မြေ၊ လယ်ယာမြေ၊ ရွာမြေတွေကို အကွက်ရိုက်ပြီး ရောင်းနေတာတွေ ရှိပါတယ်။
သည်မြေတွေဟာ တရားဝင်အဖြစ် အိမ်ဆောက်ပြီး နေလို့ရတဲ့ ကွက်ရိုက်မြေတွေ ဖြစ်မဖြစ် ဝယ်သူတွေ သိ ထားဖို့လိုပါတယ်။
ဝယ်ယူကြတဲ့အခါမှာ အပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ မြေအမျိုးအစားတွေက အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်ရင် တရား ဝင်ရဲ့လား၊ ဝယ်ခွင့်ရှိလို့လား၊ လူနေလို့ရလို့လားဆိုတဲ့ မေးစရာ မေးခွန်းတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဥပဒေအရ ဥ ယျာဉ်မြေ၊ လယ်ယာမြေတွေကို လူနေခွင့်မရှိတာ၊ လူနေဖို့ ကွက်ရိုက်ရောင်းတာတွေက တရားမဝင် ဘူးလို့ လည်း ပြောကြပါတယ်။ ဝယ်ထားမိသူတွေအတွက် လိမ်ရောင်းခံရတာတွေ၊ မြေယာပြဿနာတွေလည်း ကြုံ ကြရတာတွေကြောင့် တချို့က မဝယ်ရဲကြပါဘူး။ ဈေးကွက်ထဲမှာ လယ်မြေ တွေပဲ အကွက်ရိုက်ရောင်းတာ မျိုးမဟုတ်ဘဲ ဥယျာဉ်မြေ၊ ရွာမြေတွေကိုပါ ကွက်ရိုက်ပြီး ဈေးနည်းနည်းနဲ့ ရောင်းနေကြတာတွေလည်း ရှိ တယ်။
ဥယျာဉ်မြေတွေဟာ လယ်ယာမြေထဲမှာ ပါဝင်တယ်။ မြေစာရင်းဌာနမှာ ဥယျာဉ်ခြံမြေလို့ အမည်ပေါက်နေ ပေမဲ့ လူနေရပ်ကွက်အတွင်း ရောက်နေတဲ့ မြေကွက်တွေလည်း ရှိတယ်။ မြေစာရင်းဦးစီးဌာနမှာ ဥယျာဉ်ခြံ မြေ ဖြစ်နေပေမဲ့ မြေကွက်က မြို့နယ်စည်ပင်သာယာ နယ်နိမိတ်အတွင်းမှာ ရှိပြီး လူနေရပ်ကွက်ဖြစ်နေ တာ၊ ဝယ်ထားသူက အိမ်ခွန်စည်းကြပ်ထားရင် လယ်မြေအဖြစ် အကျုံးမဝင်ဘူး။ ဒါတွေကြောင့် မြို့ရွာ ရပ် ကွက်အတွင်း ရောက်ရှိနေတဲ့ ဥယျာဉ်ခြံမြေ တွေကို အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နေကြတာလို့ အကျိုးဆောင် ရှေ့နေ မသူသူက ရှင်းပြပါတယ်။
မသူသူက “ဥယျာဉ်မြေ၊ ရွာမြေတွေကို ဂရန်အထိ လျှောက်ထားလို့ ရတာတွေရှိတယ်၊ ဥယျာဉ်ခြံမြေ တွေ ကတော့ လူနေရပ်ကွက်အတွင်း ရှိနေတယ်၊ စီမံချက်နဲ့ လျှောက်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ နေရာတွေလဲ ရှိတော့ မြေ ဂရန်အထိ လျှောက်ခွင့်ရတဲ့ နေရာတွေလဲ ရှိနေတာကြောင့် စိတ်ပူစရာတော့ မရှိဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ဝယ်ထားတဲ့ မြေကွက်က အချက်အလက်တွေ၊ စာရွက်စာတမ်းတွေ၊ စစ်မှန်ဖို့တော့ လိုတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
ရွာမြေဆိုတာ လူနေရပ်ကွက်အတွင်းရှိ နိုင်ငံတော်က တရားဝင်ချပေးထားတဲ့ မြေ မဟုတ်သေးတဲ့ မြေအ မျိုးအစားလို့ သိရပါတယ်။ စီမံချက်နဲ့ ဂရန်လျှောက်ထားခွင့် ရနိုင်တဲ့ အမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ တချို့က ကျေးရွာ တိုးချဲ့မြေလို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်။ လူနေမြေ မဟုတ်ဘဲနဲ့ လယ်ယာမြေ အဖြစ် သတ်မှတ်ထား သေးတဲ့ နေရာတွေလည်း ရှိတာကြောင့် ဝယ်ယူတဲ့အခါမှာ သက်ဆိုင်ရာ မြေတိုင်းရုံးတွေမှာ စိစစ်ဖို့တော့ လိုပါတယ်။
“ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ လူနေရပ်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ မြေဖြစ်နေရင်တော့ ပိုပြီး ကောင်းတယ်၊ လူမနေ သေး တဲ့ ကွင်းပြင်တွေမှာ အကွက်ရိုက်ရောင်းတာတွေကိုတော့ ဝယ်လို့မရတာတော့မဟုတ်ဘူး၊ ဝယ်လို့ရတယ်၊ လူနေလို့တော့ မရဘူး၊ တရားမဝင်ဘူး၊ လူနေရပ်ကွက်အတွင်းမှာ လူနေထိုင်မှုများတဲ့ နေရာတွေ၊ ကျေးရွာ တိုးချဲ့တွေမှာ ရှိတဲ့ ဥယျာဉ်မြေ၊ ရွာမြေ တွေကိုတော့ လယ်ယာမြေထဲ ထည့်မှတ်လို့ မရတာတွေရှိတယ်” လို့ မသူသူက ပြောပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်က ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ လယ်ယာမြေ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃(က)မှာ လယ်ယာမြေကို လယ်မြေ၊ ယာမြေ၊ ကိုင်း ကျွန်းမြေ၊ တောင်ယာမြေ၊ နှစ်ရှည်ပင်စိုက်ပျိုးထားတဲ့ မြေ၊ ဓနိမြေ၊ ဥယျာဉ်မြေ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ပန်းမန် စိုက်ပျိုးတဲ့ခြံမြေ၊ မြေနုကျွန်းမြေ၊ စတာတွေကို ခေါ်ဆိုတာလို့ ပါဝင်ပါတယ်။ အဲသည်ထဲမှာ မြို့နယ်နိမိတ်၊ ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ လူနေအိမ်ရာတွေ၊ ဘာသာရေး အဆောက်အအုံ နယ်နိမိတ်တွေ မပါဝင်ဘူးလို့ သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အရင်က ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ လယ်ယာမြေ ဥပဒေတွေအရ လယ်ယာမြေတွေကို လွှဲပြောင်းရောင်းချဖို့ ခွင့်မပြုထား ပါဘူး။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ပြန်လည်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ လယ်ယာမြေ ဥပဒေမှာတော့ လယ်ယာမြေကို ရောင်းချ၊ ပေါင်နှံ၊ ငှားရမ်း၊ လဲလှယ်၊ ပေးကမ်းမှုတွေ ပြုနိုင်တယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြုလုပ်မယ်ဆို သက် ဆိုင်ရာ မြို့နယ်၊ ကြေးတိုင်နဲ့ မြေစာရင်းဦးစီးဌာနရုံးမှာ အရောင်းအဝယ် မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ချုပ်ပြီး ပြုလုပ်မှ တရားဝင်တာဖြစ်ပြီး လူနေခွင့် မရှိဘဲ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းပဲ လုပ်ကိုင်ရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဈေးကွက်ထဲမှာ အကွက်ရိုက်ရောင်းချနေတဲ့ လယ်ယာမြေတွေ၊ ဥယျာဉ်မြေတွေ၊ ရွာမြေတွေက လူနေ ရပ် ကွက်အတွင်းမှာ ရှိတာတွေ ရှိသလို လူနေရပ်ကွက် မဟုတ်ဘဲ လယ်ယာမြေအဖြစ်ဘဲ ရှိနေတဲ့ မြေကွက် တွေလည်း ရှိနေတာကြောင့် သတိပြုသင့်တယ်။ မြေကွက်ဝယ်မယ်ဆိုရင် မြေစာရင်းဦးစီးဌာနကို လယ်ယာ မြေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတာ ဟုတ်မဟုတ် စုံစမ်းရမှာပါ။ မြေစာရင်းဥိးစီးဌာနမှာ ဝယ်ယူတာဆိုရင်တော့ မြို့မြေစာရင်းထဲမှာ ပါဝင်မှ ဝယ်သင့်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဈေးကွက်ထဲမှာ အကွက်ရိုက် ရောင်းချနေကြတဲ့ မြေကွက်တန်ဖိုးတွေက ပေ ၄၀ x ပေ ၆၀ တစ်ကွက်ကို ကျပ် ၁၀ သိန်းကျော်ကနေ ကျပ် သိန်း ၄၀ ကြားအထိ ရှိပါတယ်။
Ref: 249, GEMS Condo $ 1 500
283, ဂရန်မြေရောင်းမည် Lakh3500
Ref: 254, GEMS Condo with Inya Lake View $2500
Ref: 274, Hill Top, Condominium For Sale Lakh 27 000
Myanmar Property - Find Myanmar real estate listings, search property for sale/rent with Winningland.org, Myanmar property website providing free real estate advertising service.
Copyright © 2014-2017 | WinningLand.org. All Rights Reserved.